Tsy nampianatra an'izany velively tao amin'ny kilasy marketing | Martech Zone
Talata, Martsa 11, 2014 Douglas Karr
Tsy mino aho fa tsiambaratelo izany, saingy mino aho fa ny paikady mahomby indrindra izay matetika tsy raharahian'ny varotra sy ny marketing dia ny sandan'ny tamba-jotra. Ny olona dia mifantoka amin'ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola, statistika, fikarohana, marika, famolavolana, endrika, fahombiazana, famokarana, sns rehefa miasa amin'ny ezak'izy ireo amin'ny marketing. Tsara ary tsara izany rehetra izany fa raha manome antsipiriany an'ireo rehetra ireo ianao, dia tsy misy na iray aza manome anao ny làlan'ny vola ilain'ny orinasanao hiainana sy hiroborobo.
Ny marketing dia tsy misy raha tsy misy mpihaino na fiaraha-monina. Amin'ny fotony, mino aho fa ny asan'ny varotra sy ny marketing dia tsy mivarotra, izany dia ny fampitomboana ny fifampitokisana eo amin'ilay olona manana ny olany sy ny vahaolanao. Nihaona amina olona manaitaitra mahavariana izay namokatra vokatra mahavariana… aho saingy tsy nanana tambajotra nivarotra azy ireo. Ary… ny mifanohitra amin'izay no izy… nijery ireo vokatra tsy misy fotony aho nanao azy an-tsena sy niroborobo. Tsy noho izy vokatra tsara, fa satria nisy mpijery izay atokisana ny orinasa mivarotra azy.
Izaho manokana dia tsy mampiasa vola toy ny taloha intsony amin'ny orinasa, vokatra na endri-javatra. Fa kosa, mampiasa vola be amin'ny olona aho. Manokana fotoana hihaonana amin'ny olona maro kokoa aho, hanampiana olona betsaka kokoa, hisarika ny saina sy hivarotra ho an'ireo izay mendrika izany, ary hanokana fotoana sy hery mihitsy aza amin'ny fotoana tsy misy tombony mivantana ho ahy. Miankina amin'ny hoe iza ilay tambajotra.
Misy mpandraharaha mahomby fantatro fa nandoro ny tambajotrany. ny voalohany Ny orinasa dia mahavariana ary, amin'ny alàlan'ny varotra avo lenta, miainga ary mandeha tsara. Fa ny azy ireo Manaraka latsaka ambany ny orinasa. Fa maninona Satria lany ny fitokisana. Izany no mahatonga ireo orinasa mamiratra tsy manakarama miankina amin'ny traikefa na talenta, matetika izy ireo dia manakarama mifototra amin'ny tambajotra itondranao azy ireo. Ny tamba-jotra dia sarobidy kokoa noho ianao raha momba ny varotra sy ny marketing. Ampiasao amin'ny tambajotrao dia ho hitanao fa fananana sarobidy kokoa amin'ny mpampiasa anao na ny mpanjifanao ianao.
Aza mino ahy? Jereo ireo orinasa mahomby manodidina anao, araho maso akaiky ny tambajotran'ireo mpanjifa sy mpivarotra iarahany miasa. Avy amin'ny olona ny vola azo - tsy avy amin'ny vokatra, endrika na logo mahafinaritra. Na dia mila mampiasa vola amin'ny persona matihanina amin'ny Internet aza isika, tsy tokony hivarotra ny tanjona - tokony hanangana tamba-jotra sy hameno ny elanelana misy eo amin'ny fanapahan-kevitry ny fividianana sy ny varotra amin'ny tetezana fahatokiana.
Ny mpanjifanay sarobidy indrindra dia ireo izay niaraka taminay nandritra ny fotoana kelikely ary matoky anay. Nanambola be tamin'ny serivisinay izy ireo ary nataonay antoka ny fahombiazan'izy ireo mba tsy hahavery ny fitokisany aminay mihitsy. Ho setrin'izany, izy ireo ihany koa dia mitondra anay ny referéral tsara indrindra… satria efa misy ny fifampitokisana ao amin'ny tambajotran'izy ireo. Manambola amin'ny tambajotranao.
Tags: sandan'ny tamba-jotrafifaneraseranatambajotra soical